Iyo Inbound Kushambadzira Maitiro | Martech Zone
Iyo Inbound Kushambadzira Maitiro
Chipiri, Gunyana 16, 2012 Douglas Karr
Impact Branding & Dhizaini yaisa pamwechete iyi yakanaka infographic, Iyo Inbound Kushambadzira Maitiro iyo inopfupikisa iyo inbound yekushambadzira maitiro mune matanhatu matanho. Kushambadzira kuri mukati inzira yakaoma - ine kutsamira kwakawanda pakati pemikana, saka hazvisi nyore kuwana maitiro akareruka graphical seizvi.
Inbound Kushambadzira kunogona kuve kunovhiringidza uye kwakakura maitiro. Chinangwa chedu ndechekuti zviite sezviri nyore sezvinobvira, uye uwane iwe zvauri kutsvaga Tarisa uone maitiro atakagadzira kuti uwane yako Inbound Kushambadzira zvinangwa.
Zvangu chete zvinowedzerwa zvaizove kuyedza uye chiuno kubva padanho rechitanhatu kusvika padanho 6. Kushambadzira kuri mukati kunoda kuyedzwa kuti uve nechokwadi chekuedza kwakakosha kwauri kushandisa kuri kuita zvine mutsindo uye unoedza nemeseji dzakasiyana, dzakasiyana nzira, uye akasiyana zvipo. Chimwe chidimbu chisipo ndicho chiuno kubva pachiyero kuenda kunatsiridzwa kwemaitiro ako ekutengesa Kuziva izvo zvinoshanda zvinofanirwa kutyaira yako inbound kushambadzira kuyedza!
Tags: 6 matanho ekushambadzira inboundinbound Marketinginbound kushambadzira infographicmaitiro ekushambadzira akapindakutungamirira kutarisiraseo
Nei Uine Kashoma Fomu Minda Inotyaira Shanduko
Maitiro Ekugadzirisa peji reKutsvaga Kwemunharaunda
Nov 30, 2012 na5:46 AM
Kushambadzira kweInternet kunopinda zvachose.
Vanhu vari kutsvaga mhinduro yako pavanotsvaga online. Vanoda
ruzivo rwakakosha pane zvavari kutsvaga. Vakoka
vatengesi kumasuo avo.